Pads,Tampons and Cups - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Pads,Tampons and Cups
” မိနျးမသားတိုငျး သိလိုတဲ့အရာ “
အရငျခတျေကတော့ မိနျးမသားတို့ရဲ့ လစဉျဓမ်မတာစကျဝနျးကိုဖွရှေငျးဖို့ တဈလတဈလ ထဘီအောကျမှာ ထဘီအဟောငျးလေးကတောငျးကြိုကျဝတျရတာတဈမြိုး၊ အဝတျစုတျအဟောငျးလေးတှကေို ခပျထူထူခေါကျပွီးဘောငျးဘီထဲထညျ့ခံဝတျရတာကတဈဖုံ… ပွီးရငျ ဒါလေးတှကေို လူမမွငျသူမမွငျအောငျပွနျလြှျောပွီး အိမျနောကျဖေးမှာအခွောကျခံလှနျးပွီးပွနျသုံးရ…အလုပျတှရှေုပျလှတယျ။
ဟော…အခုခတျေမယျတော့….ရှေးခယျြစရာတှကေိုပုံလို့!အမြိုးသမီးလစဉျသုံးပစ်စညျးရှိတယျ၊ ဂှမျးတောငျ့ ရှိတယျ၊
ရာသီသှေးခံခှကျ..ဒါက အဓိက အမြိုးအစားတှေ..အမြိုးအစားတဈခုခငျြးစီမယျလညျး တံဆိပျအမြိုးမြိုး ….ရှေးစရာကိုစုံလို့….။
အဲ…. အဲ့ကတြော့…ဘာပွသနာရှိလာလဲ ဆိုတော့…ဘယျအမြိုးအစားက အကောငျးဆုံး ကနျြးမာရေးနဲ့အညီညှတျဆုံးလဲဆိုတာ သိခငျြလာကွပွနျရော… ။ဒီတော့… ဒီပစ်စညျးလေးတှေ တဈခုခငျြးရဲ့ အားသာခကျြ အားနညျးခကျြလေးတှကေို
ပွောပွပေးမယျ….ကောငျးကြိုးဆိုးပွဈနဲ့ မိမိသုံးမယျ့အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး မိမိနှဈသကျရာသာ ရှေးပတေော့နေျာ့…
ဒါလေးတှကေတော့ ၄နာရီ – ၈နာရီ ကွားတဈခါလဲပေးရတယျ။လတျတလော မွနျမာနိုငျငံမှာ အသုံးအမြားဆုံးလောကျသှားကတြယျ။
သှေးဆိပျသငျ့တာမြိုးလညျး ဖွဈနိုငျခအြေတျောလေးနညျးတယျ။တဈခုရှိတာက…pad ခံထားရငျ ခံထားမှနျးခံစားသိနတေော့ နရေတာ သကျတောငျ့သကျသာမရှိဘူး။ နောကျပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတာတို့၊ရကေူးတာတို့၊ သင်ျကွနျလို ရစေိုတာမြိုးဆိုရငျလညျး သူနဲ့က
အဆငျသိပျမပွဘေူးပေါ့။ညဝတျအိပျရငျလညျး နရောရှသှေ့ားပွီး အဝတျအစားတှေ ၊အိပျယာခငျးတှကေို ရာသီသှေးတှေ
စှနျးကုနျတာမြိုးဖွဈလရှေိ့တော့ ညအိပျဝတျဖို့လညျး မသငျ့တျောပွနျဘူး။
သူကတော့ ထညျ့ထားလို့ ထညျ့ထားမှနျးမသိရတဲ့အတှကျ နထေိုငျသှားလာရ အဆငျပွတေယျ။ ရကေူး၊ရဆေိုမယျ့နရောမြိုးမှာဆိုလညျး အိုခတေယျ။လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရငျလညျး အေးဆေးပဲ။ပွသနာက သူက အခြိနျအရမျးကွာကွာထားလိုကျမိရငျ ဂှမျးတောငျှ့ှာိနတေဲ့ရာသီသှေးတှကေနေ ဘကျတီးရီးယားတှပေေါကျပှားပွီးသှေးဆိပျသငျ့နိုငျတယျ။ အဲ့တော့
၄နာရီခွားတဈခါလောကျပုံမှနျလဲပေးရတယျ။ ၄နာရီခွားဆိုတော့နညျးနညျးတော့ အလုပျရှုပျတဲ့အပွငျ ညအိပျရငျ
ရာသီသှေးခံခှကျ (Menstrual Cup)
အပျေါနှဈခုနဲ့ယှဉျရငျ ဒါလေးက ပိုကောငျးတယျတောငျ ဆိုရမလားပဲ။ဒီခှကျလေးတှကေတော့ ၁၂နာရီမှတဈခါလဲလို့ရတယျ။
သှေးဆိပျတကျမှာ ဘာညာလညျး ပူစရာမလိုဘူး။ ခှကျလေးတှကေ ပွနျဆေးပွီး ပွနျသုံးလို့ရတယျ။ တဈခုပဲ…ခှကျလေးတှေ ဆေးပွီး ပွနျသုံးတဲ့အခါ သခြောစငျကွယျအောငျဆေးဖို့ပဲ။
စုံသလောကျတော့ရှိသှားပွီ…ဆိုတော့…မိမိအသုံးပွုမယျ့ အခွအေနေ ၊အနအေထားပျေါမူတညျပွီး…သငျ့တျောတဲ့အခြိနျမှာ သငျ့တျောမယျ့အမြိုးအစားကို ရှေးခယျြသုံးစှဲနိုငျကွပါစလေို့!
" မိန်းမသားတိုင်း သိလိုတဲ့အရာ "
အရင်ခေတ်ကတော့ မိန်းမသားတို့ရဲ့ လစဉ်ဓမ္မတာစက်ဝန်းကိုဖြေရှင်းဖို့ တစ်လတစ်လ ထဘီအောက်မှာ ထဘီအဟောင်းလေးကတောင်းကျိုက်ဝတ်ရတာတစ်မျိုး၊ အဝတ်စုတ်အဟောင်းလေးတွေကို ခပ်ထူထူခေါက်ပြီးဘောင်းဘီထဲထည့်ခံဝတ်ရတာကတစ်ဖုံ... ပြီးရင် ဒါလေးတွေကို လူမမြင်သူမမြင်အောင်ပြန်လျှော်ပြီး အိမ်နောက်ဖေးမှာအခြောက်ခံလှန်းပြီးပြန်သုံးရ...အလုပ်တွေရှုပ်လှတယ်။
ဟော...အခုခေတ်မယ်တော့....ရွေးချယ်စရာတွေကိုပုံလို့!အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းရှိတယ်၊ ဂွမ်းတောင့် ရှိတယ်၊
ရာသီသွေးခံခွက်..ဒါက အဓိက အမျိုးအစားတွေ..အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီမယ်လည်း တံဆိပ်အမျိုးမျိုး ....ရွေးစရာကိုစုံလို့....။
အဲ.... အဲ့ကျတော့...ဘာပြသနာရှိလာလဲ ဆိုတော့...ဘယ်အမျိုးအစားက အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးနဲ့အညီညွတ်ဆုံးလဲဆိုတာ သိချင်လာကြပြန်ရော... ။ဒီတော့... ဒီပစ္စည်းလေးတွေ တစ်ခုချင်းရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်လေးတွေကို
ပြောပြပေးမယ်....ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်နဲ့ မိမိသုံးမယ့်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာသာ ရွေးပေတော့နော့်...
ဒါလေးတွေကတော့ ၄နာရီ - ၈နာရီ ကြားတစ်ခါလဲပေးရတယ်။လတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးအများဆုံးလောက်သွားကျတယ်။
သွေးဆိပ်သင့်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ချေအတော်လေးနည်းတယ်။တစ်ခုရှိတာက...pad ခံထားရင် ခံထားမှန်းခံစားသိနေတော့ နေရတာ သက်တောင့်သက်သာမရှိဘူး။ နောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတို့၊ရေကူးတာတို့၊ သင်္ကြန်လို ရေစိုတာမျိုးဆိုရင်လည်း သူနဲ့က
အဆင်သိပ်မပြေဘူးပေါ့။ညဝတ်အိပ်ရင်လည်း နေရာရွေ့သွားပြီး အဝတ်အစားတွေ ၊အိပ်ယာခင်းတွေကို ရာသီသွေးတွေ
စွန်းကုန်တာမျိုးဖြစ်လေ့ရှိတော့ ညအိပ်ဝတ်ဖို့လည်း မသင့်တော်ပြန်ဘူး။
သူကတော့ ထည့်ထားလို့ ထည့်ထားမှန်းမသိရတဲ့အတွက် နေထိုင်သွားလာရ အဆင်ပြေတယ်။ ရေကူး၊ရေဆိုမယ့်နေရာမျိုးမှာဆိုလည်း အိုခေတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်လည်း အေးဆေးပဲ။ပြသနာက သူက အချိန်အရမ်းကြာကြာထားလိုက်မိရင် ဂွမ်းတောင့်ွှာိနေတဲ့ရာသီသွေးတွေကနေ ဘက်တီးရီးယားတွေပေါက်ပွားပြီးသွေးဆိပ်သင့်နိုင်တယ်။ အဲ့တော့
၄နာရီခြားတစ်ခါလောက်ပုံမှန်လဲပေးရတယ်။ ၄နာရီခြားဆိုတော့နည်းနည်းတော့ အလုပ်ရှုပ်တဲ့အပြင် ညအိပ်ရင်
ရာသီသွေးခံခွက် (Menstrual Cup)
အပေါ်နှစ်ခုနဲ့ယှဉ်ရင် ဒါလေးက ပိုကောင်းတယ်တောင် ဆိုရမလားပဲ။ဒီခွက်လေးတွေကတော့ ၁၂နာရီမှတစ်ခါလဲလို့ရတယ်။
သွေးဆိပ်တက်မှာ ဘာညာလည်း ပူစရာမလိုဘူး။ ခွက်လေးတွေက ပြန်ဆေးပြီး ပြန်သုံးလို့ရတယ်။ တစ်ခုပဲ...ခွက်လေးတွေ ဆေးပြီး ပြန်သုံးတဲ့အခါ သေချာစင်ကြယ်အောင်ဆေးဖို့ပဲ။
စုံသလောက်တော့ရှိသွားပြီ...ဆိုတော့...မိမိအသုံးပြုမယ့် အခြေအနေ ၊အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး...သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ သင့်တော်မယ့်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်သုံးစွဲနိုင်ကြပါစေလို့!